Ethereum Wallet ImToken ane $ 35B mu deposits, kupfuurisa 99% US mabhanga - Blockchain News
Chikumi 3, 2018 arun
Ethereum Wallet ImToken ane $ 35B mu deposits, kupfuurisa 99% US mabhanga
China-kwakavakirwa ImToken, mumwe wokutanga Cryptocurrency uye Ethereum wallets dzakanyorwa pamusoro Apple App Store, haana kupatsanurwa kupfuura $ 35 mabhiriyoni deposits mumakore mashoma apfuura, outperforming Coinbase.
Zvakafanana Blockchain, MyEtherWallet uye MyCrypto, ImToken munhu akasununguka uye asiri portal chikwama kuti unobvumira vanoshandisa yokuchengetera, tumai uye kugamuchira cryptocurrencies akadai Ethereum apo ukaramba kudzora dzavo dzakavanzika kiyi uye nhoroondo.
Mumazuva Ethereum okutanga, asati nekukudziridza nevakawanda wallets akafanana MyEtherWallet uye MetaMask, ImToken ndiye chete rakavimbika Mobile chikwama vanoshandisa vaigona kushandisa pamusoro Mobile namano. ImToken vomuzana unomutsa nani uye nyore Anwendung kwakaguma kuchikuva kushandisa kupfuura $ 35 mabhiriyoni deposits, rinomirira kupfuura 99 muzana US nemabhangi.
In May, Bloomberg yakashuma kuti Xapo, izvo kupatsanurwa kupfuura $ 10 mabhiriyoni deposits mumakore matatu apfuura, ane zvakawanda deposits ayo kupfuura 5,670 mabhanga muUnited States kana 98 muzana nyika mabhanga. $ 35 mabhiriyoni deposits nokuda ethers nedzimwe cryptocurrencies aizoita ImToken kumusoro 0.5 muzana, pamwe mabhanga makuru uye mari nemasangano.
Investment kubva Chinese VC Giant IDG Capital
IDC Capital raMwari China-yakavakirwa ImCrypto, inova rimwe remasangano asingashumbi guru makambani Asia, akapiwa $ 10 miriyoni ose mari svondo rino. IDG Capital akaita paakapiwa kupfuura 700 makambani pamwe 150 vanobudirira migumo, kusanganisira multi-mabhiriyoni emadhora makambani akadai runharembozha muiti Xiaomi, Anker wearable bhatiri muiti, cryptocurrency boka Circle uye cryptocurrency swap Coinbase.
Basa muenzaniso ImCrypto ndiye akafanana Blockchain nemamwe blockade asiri dhepoti platforms. Nokuda kwayo läpinäkyvä functionality uye Software kwayo vakasununguka, hakuna kugadzikana tsime mari. Apo nyore ImCrypto pachikuva pakupedzisira kwayo kubudirira kwenguva refu, kuoma monetizing ImCrypto pasinei mabhiriyoni emadhora zvakachengetwa pachikuva kuti kuonekwa chinetso chikuru nokuda makambani, kunyanya asingashumbi guta yemakambani, ari chinyakare Michina indasitiri.
IDG Capital raMwari $ 10 miriyoni mari akaratidza chivimbo kwenguva ikure cryptocurrency nehombodo dzaishandisa. Kunyange asiri chitambi isina wallets Pari havana kutengesa uye vakaderera mubereko varikumahombekombe, asingashumbi guta yemakambani achiri kumhanya mamiriyoni emadhora zvemadhenari mari, vachiziva zvingakwanisa cryptocurrency wallets.
“We akaziva kuti Ethereum panguva mangwanani chaizvo chikuva uye chakabatikana differentiating isu kubva vakwikwidzi, kukura kwakanga zvizere Organic, hatina yokutengesa kana kushambadza bhajeti,” akati ImToken dangamusha Ben He, achitaura kuti vachangobva kuwana kushanda guta IDG raizovabatsira kuti kambani kutsvaka yokutengesa uye hasha kuwedzera munyika yose cryptocurrency musika.
Trust kubva makambani
Recently, panguva bvunzurudzo pamwe Bloomberg Terevhizheni, Dan Morehead, CEO pamusoro Pantera Capital, munhu $ 1 bhiriyoni cryptocurrency ruzhowa Fund, vakati cryptocurrency musika wacho wakatarwa anogona pfuura $ 40 tiririyoni nokufamba kwenguva.
“The $ 400 bhiriyoni musika crypto vaigona kusvika $ 4 tiririyoni, uye kunyange $ 40 tiririyoni ndechimwe zvinogoneka, ndicho for-gore 10, hazvizoitiki kurara,” akati Morehead.
Large-pamwero asingashumbi guru yemakambani uye ruzhowa mari Kazhinji netarisiro kwenguva yezvakaita cryptocurrency pamusika uye vane chivimbo chokuti cryptocurrencies achava chikuru twa kirasi kuti zvichaita kukwikwidzana zvetsika zvinhu uye munyika yose nemari hurongwa.
The Blockchain-rakapiwa R3 anosika ane muzinda dzidzo kuti magweta.
zuro, musi Februa ...
Mabhiriyoni emadhora Wall Street kambani vakatanga vanotengesa pamwe Bitcoin gore rapera
Jane Street, mumwe secre ...
Bank of Canada kwatiri ...